ကလေးများ VR အားကစားပြိုင်ပွဲနေချင်စဖွယ်ဒိုင်နိုဆော VR မော်ဒယ် - Kydavr-တိုက်ရိုက် VR AR ထုတ်လုပ်ခြင်း,9: D VR,AR Interactive မှ Projection,5D7D ရုပ်ရှင်,အခမဲ့အပန်းဖြေပန်းခြံဒီဇိုင်း.
နေအိမ် » ကုန်ပစ္စည်း » ကလေးများ VR အားကစားပြိုင်ပွဲနေချင်စဖွယ်ဒိုင်နိုဆော VR မော်ဒယ်
ဗို့အား / ပါဝါ 220V/2.4kw
VR နားကြပ် Deepoon VR
ဂိမ်း 1PC များ
လက်မှတ်စျေးနှုန်း Working time Playing Time VR Machine Conversion Mode Income
5.အကောင်းဆုံးပြီးနောက်-ရောင်းအားန်ဆောင်မှုများ. On-site ကိုတပ်ဆင်ခြင်းအင်ဂျင်နီယာများရှိပါတယ်, 1-တစ်နှစ်အခမဲ့အာမခံနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများအတွက်;
6. ကျွန်ုပ်တို့၏ရောင်းအားများမှာ 24 ရက်နေ့က, နီးပါး 365 ရက်ပေါင်းတစ်နှစ်, အချိန်မီထုံးစံ၌ဖောက်သည်များအတွက်ပြဿနာများကိုဖြေရှင်းနိုင်မှ, ဖောက်သည်များ၏အကျိုးစီးပွားကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့ဖြစ်နိုင်သမျှအများဆုံးအတိုင်းအတာအထိ. လူ့အချက်များအပြင်, သဘာဝဘေးဒဏ်, လူအပေါင်းတို့ပစ္စည်းကိရိယာများမအောင်မြင်မှုများအတွက်အာမခံကာလအတွင်းစက်ရုံရဲ့တာဝန်ဖြင့်ဖုံးလွှမ်းလျက်ရှိသည်.
မေး: How many ages for kids:
တစ်ဦးက:3- 10 years old normally.
မေး: ငါတို့သည်သင်တို့၏အရည်အသွေးနှင့်အပြီး-အရောင်းဝန်ဆောင်မှုနှင့် ပတ်သက်. စိုးရိမ်နေကြသည်.
တစ်ဦးက: တိုက်ရိုက်ထုတ်လုပ်ခြင်း, မည်သည့်နည်းပညာပြဿနာအကြောင်းကိုအဘယ်သူမျှမစိုးရိမ်;
တာဝန်အပေါ်ကျွန်ုပ်တို့၏ဝန်ဆောင်မှုအဖွဲ့ ယူ. အလှည့်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့မစ်ရှင်ကြောင်းဖောက်သည်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းနှောင့်နှေးဘယ်တော့မှမ!
မေး: How long can be the vr headset taken?